Shaqada ECG ee Apple Watch ayaa dhawaan laga heli karaa Kuuriyada Koonfureed iyo Ruushka | Waxaan ka socdaa mac
Waxqabadka ECG ee Apple Watch ayaa dhawaan laga heli karaa Koonfurta Kuuriya iyo Ruushka
Mid ka mid ah astaamaha ugu waaweyn ee Apple Watch waa awoodda ay u leedahay inay la socoto caafimaadka isticmaalaha. Mid ka mid ah shaqooyinkaas ayaa ah suurtagalnimada in lagu sameeyo qalabka korontada ee 'electrocardiogram' kaas oo looga digay dhibaatooyinka wadnaha ee suurtogalka ah Hawl la muujiyey si loo badbaadiyo nafo badan taasna Dhawaan waxaa laga heli doonaa Koonfurta Kuuriya iyo Ruushka.
Koonfurta Kuuriya iyo Ruushka waxay ku heshiiyeen inay ku xalliyaan shaqada ECG shirkadda Apple Watch
Markii ay Apple sii deysay muuqaalka electrocardiogram (ECG) ee Apple Watch, lagama heli karo dhamaan wadamada si siman. Maaddaama ay tahay arrin caafimaad, waxay u baahan tahay oggolaanshaha hay'adaha u dhigma arrintan mid kasta oo ka mid ah waddamada loo adeegsanayo. Caqli ahaan, Mareykanku wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee leh shaqadan cusub. Kolombiya ayaa dhawaan ku soo biirtay oo waxaan ku dhex yeelan doonnaa shaqadan Koonfurta Kuuriya iyo Ruushka.
ECG waxay muujisay waqtiyo aan tiro lahayn taas waxay u adeegtaa badbaadinta nafta. Mararka qaarkood ayaa ka digtay isticmaalahaaga dhibaatooyinka wadnaha Ka dib markay dhakhaatiirtu arkeen waxay go'aansadeen haddii aysan saacadda ahayn, waxay u badan tahay inuu isagu dhiman lahaa.
Apple waxay sheegtay in shaqadan laga heli doono waqti yar Koonfurta Korea iyo Ruushka labadaba waana la heli doonaa ku dari doonaa Imtixaannada soo socda ee iOS 14.2 iyo cusbooneysiinta barnaamijka WatchOS 7.1. Lama oga taariikhda gaarka ah ee ku biiritaanka tani dhici doonto, taasi waa, marka nidaamyadan hawlgalka loo soo bandhigi doono dhammaan dhagaystayaasha, waa inay noqotaa wax yar sii deynta beta ee dhacaya.
Waxaa jira wax ka yar iyo ka yar oo ugu dhakhsaha badan waxaa la filayaa in shaqeynta ECG waxaa heli kara dhammaan isticmaaleyaasha adduunka. Waxay ku xirnaan doontaa hay'ad kasta oo caafimaad oo waddan kasta ka jirta, laakiin waxaa iska cad in waxtarkeeda mar hore la caddeeyay. Marka, waa arrin waqti leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Watch » Waxqabadka ECG ee Apple Watch ayaa dhawaan laga heli karaa Koonfurta Kuuriya iyo Ruushka
Nidaamka Tijaabada Tijaabada ayaa ku degi kara macOS usbuuca soo socda